Nidaam hal abuur leh oo abuuraya animation wareeg ah ama GIF | Abuurista khadka tooska ah
Si aad u nooleyso a sawir xardhan Muhiim maahan in la sameeyo wax soo saar waqti badan qaata, marka lagu daro in ay aad uga sahlanaan karto sida caadiga ah ee la rumaysan yahay, maadaama aad u baahan tahay oo keliya inaad yeelato xirfado sawir leh iyo dabcan, aad u hal abuur badan.
1 Tilmaamaha abuurista animation wareeg ah
1.1 Halkee laga bilaabayaa
1.2 Si fudud u dhig
1.3 Wareegyada waa inay noqdaan kuwo hagaagsan
Tilmaamaha abuurista animation wareeg ah
Halkee laga bilaabayaa
Sida laga soo xigtay hal naqshadeeye, tallaabada ugu horreysa waxay ku saabsan tahay geesinimada ugu badan, maadaama ay ka kooban tahay sheeko bilow.
Si tan loo sameeyo, waxaa lagugula talinayaa inaad ka fikirto wax madadaalo ah oo aan kaliya soo jiidanayn laakiin sidoo kale si fudud loo fahmi karo oo iska cad, waa inay si fiican u shaqeysaa marka loo isticmaalo animation loop ama GIF.
Tusaale ahaan, mashruuc ku saabsan “Game of Thrones”Kaas oo loo abuuray GIF dhammaan qaybaha. Si kastaba ha noqotee, caqabadda ayaa ku jirta geedi socodka hal abuurka, Maaddaama dhaqdhaqaaqyo ku saabsan muuqaalka rabshadaha ay tahay in la abuuro taas oo noqonaysa mid jilicsan oo mataleysa qaybta oo dhan.
Si fudud u dhig
Naqshadeynta ayaa ka fudud, habka fudud ee hawshu u socoto ayaa noqon doonta, oo inyar yaraa ayaa iyadu bixin karta xorriyadda weyn markii animating. Waa in la ogaadaa in naqshad isku dhafan ay lahaan doonto faahfaahin badan, qaabab iyo hoosooyin, si markaa ay u qaadato shaqo badan markii la kicinayo, maadaama ay lagama maarmaan tahay in la eego mid kasta oo ka mid ah looxyada
Furaha ayaa ah in la ilaaliyo jihaynta animation sida ugu fudud uguna yar ee suurtogalka ah, sidaa darteed ujeedadu waxay noqon doontaa:
Adeegso qaababka joomatari.
Isticmaal midabada barta.
Isku day ha isticmaalin faahfaahin aan loo baahnaynKhadadka fudud, sida faraha iyo suulasha, waxay bixiyaan karti ay kula ciyaari karaan iyaga oo aad moodo inay moodal moodal cajiin oo kale yihiin.
Waxa ugu fiican ee tan ku saabsan waa inaad leedahay suurtogalnimada adeegsiga iyo ku xadgudubka foomamkan iyadoon laga tegin kaftanka, qaabka ama xiisaha muuqaalka. Ka fikir tusaale ahaan nooleynta jidh aad u ballaaran oo weji yar yar ama isticmaalaya gacmo aad u dhumuc weyn iyo lugaha khafiifka ah.
Maskaxda ku hay in animations-yada jilayaasha fudud ay u muuqdaan kuwo aad u qurux badan oo ka sarreeya dhammaan, muujiya badan, sida:
U adeegso khadadka fudud addimada.
Ku isticmaal khadadka waxoogaa dhumuc ah jirka.
Isticmaal 2 wareeg si aad u sameyso madaxa iyo timaha.
Wareegyada waa inay noqdaan kuwo hagaagsan
Guuldarrooyinka si fudud ayaa loo ogaadaa haddii animation-ka loo yaqaan 'looping' uusan fiicnayn, sidaas waa inaad fiiro gaar ah siisaa faahfaahinta yar yar iyo xitaa fiiro gaar ah mid kasta oo ka mid ah looxyada animation-ka, si aad u hubiso in loop uusan u baahnayn nooc ka mid ah dib-u-hagaajinta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Nidaam hal abuur leh oo loogu talagalay abuurista animation wareeg ah ama GIF